विपदमा मोबाइल प्रविधि, मानव जीवनमा कति प्रभावकारी? - Banking Khabar
विपदमा मोबाइल प्रविधि, मानव जीवनमा कति प्रभावकारी?
जब कुनै युद्ध वा प्राकृतिक विपत्तिका कारण विश्वमा ठूलो तहसनहस हुन्छ अनि लाखौँ मानिसहरु घरवारविहीन हुन्छन् , त्यसबेला अधिकांश सञ्चार वा पूर्वाधारका संरचना या त क्षतिग्रस्त हुन्छन् वा तिनीहरु काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी उच्चायोगका एक प्रविधि विशेषज्ञ जन वार्नेसका अनुसार कुनै पनि शरणार्थी शिविरमा पुग्ने बित्तिकै मानिसहरुले सधैँ सोध्ने पहिलो प्रश्न – यहाँ फोन कहाँ चार्ज गर्न पाइन्छ-भन्ने हुन्छ।
त्यसका अलावा उनीहरुले यहाँ वाइफाइको सुविधा छ कि छैन भनेर पनि सोध्ने गर्छन्। उनका अनुसार यी प्रश्नहरु त्यस्ता शिविरहरुमा खाना वा पानी छन् या छैनन् भन्ने भन्दा बढी चासोका साथ सोध्ने गरिन्छ।
एकदमै कठिन अवस्थामा समेत तत्कालै जडान गर्न सकियोस भनेर उक्त उपकरण भित्रै ब्याट्रीसमेत राखिएको छ। स्वत: स्थानीय इन्टरनेट हटस्पट तयार गर्ने वा अन्य नेटवर्कसँग जोडिएर ठूलो भूभागसम्म इन्टरनेट सेवा फैलाउने क्षमता सो उपकरणमा छ।
विश्वभरका विपदग्रस्त क्षेत्रहरुका लागि ठूलो सञ्चार परियोजनाको स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेका प्रविधि कम्पनीहरुले साना उपकरणको प्रयोगबाट पुग्ने लाभलाई समेत महसुस गरिरहेका छन्।
एउटा सानो सौर्य उर्जा प्यानलसहितको उक्त उपकरणमा ६ घण्टासम्म चल्न सक्ने ब्याट्री जोडिएको छ। उक्त कम्पनीले स्थानीय व्यक्तिहरु वा सहायता निकायहरुले १० मिनेटभित्रै यो प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने जनाएको छ।
‘इन्स्टेन्ट नेटवर्क मिनी किट’ नामक उक्त उपकरण २०७२ काे विनाशकारी भूकम्प जाँदा काठमाडाैंमा सञ्चारमा पुन: पहुँच स्थापित गर्न प्रयोग गरिएको थियो। त्यो भन्दा बढी क्षमताका त्यस्तै उपकरणहरु दक्षिण सुडान र फिलिपिन्समा प्रयोग गरिसकिएका छन्।
पछिल्ला स्मार्टफोनहरुले धेरै खालका सेवा दिए पनि तिनीहरुको ब्याट्रीको आयु छोटो रहँदै आएको छ।
स्थानीय सञ्चार नेटवर्क स्थापना गरेपछि महत्वपूर्ण सूचनाहरु शरणार्थी, विपद् पीडित र सहायता निकायहरुलाई दिनु सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। तर ठिक ढंगले सूचना प्रवाह नहुँदा विपद्को समयमा निक्कै धेरै अन्योल हुनुका साथै सहायताका प्रयासहरु दोहोरिने गरेको प्रभावित स्थानमा खटिएकाहरुको अनुभव छ।
त्यही भएर गुगलदेखि मेद्सां डु मोन्डेसम्मका कयौँ संस्थाहरुले एउटै प्रणालीबाट सञ्चार प्रवाह गर्ने ‘एप्स’हरुको निर्माणमा जुटिरहेका छन्।
त्यस्ता एप्समार्फत विकसित देशमा रहेका चिकित्सकहरुसँग विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुलाई जोड्ने वा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सहायता निकायसँग जोड्ने र एक अर्काले गरिरहेका कामहरुको बारेमा जानकारी दिने प्रयास उनीहरुको छ।
विपद् आउनुअघि नै उपयुक्त समन्वय एवं साझेदारी निमार्ण गरी, आवश्यक पर्दा मोबाइल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रविधिको प्रयोग मात्रैले प्राकृतिक वा मानवनिर्मित प्रकोपबाट हुने पीडालाई रोक्न नसके पनि त्यसको सदुपयोगले कम्तीमा पनि सरकार, सहायता निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी परिचालनमा सघाउ पुर्याउन सकिन्छ। र त्यसले सबै कुरा गुमाएका मानिसहरुलाई अझै पनि केहि कुरा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको छ भन्ने अनुभूति गराउँछ।बीबीसीकाे सहयाेगमा